Bilaogy Jordaniana: Ny andron’ny orampanala sy ireo fitantarana hafa nandritra ny volana Martsa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2018 20:13 GMT
(Marihina fa tamin'ny 18 Martsa 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny resaka toetr'andro hafahafa nataon'ny tafiotra no tantara lehibe indrindra nampalaza tampoka ny tontolon'ny bilaogy Jordaniana. Namely ny firenena nandritra ny 24 ora ny oram-panala maherivaika ary maro ny bilaogera no nanana zavatra maro notantaraina momba izany. Namoaka ny fakantsariny ny ankamaroan'izy ireo mba haka sary ity toetr'andro nahavariana ity ary samy nanana ny tantarany avy ny sary tsirairay; toy ny maha tsy manam-paharoa ny vongan-dranomandry.
[Sary avy amin'i Nas ao amin'ny The Black Iris]Nizara ny heviny momba ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy tamin'ny 8 Martsa ny bilaogera Jordaniana vitsivitsy, indrindra fa ny momba ny satan'ny vehivavy any Jordania. Somary niteraka resabe ny Mpanjakavavy Rania, rehefa nametraka fanontaniana tao amin'ny Yahoo! Answers izy izay nanontany hoe “inona no ataonao mba hankaherezana ny vehivavy ao amin'ny firenenao?” . Ary nizara ny lahatsoratra voalohany navoakany momba ny dikan'ny hoe vehivavy 30 taona tokatena ao amin'ny fiarahamonina Jordaniana tao amin'ilay lohahevitra i Khalidah.
Manana lahatsoratra mahaliana momba ny fahalemen'ny SIDA any Jordania i Batir Wardam sady mijery ihany koa ny hetaheta mihamitombo amin'ny dokambarotra.
Nikarakara adihevitra tao Amman ny BBC Radio izay miresaka momba ny fomba nanovan'ny Aterineto ny tontolontsika. Anisan'ireo mpandray fitenenana ny bilaogera Naseem Tarawnah sy Roba Al-Assi izay nizara ny traikefan'izy ireo momba ny asan'ny famahanana bilaogy any Jordania sy ny Afovoany Atsinanana.
Eo amin'ny lafiny politika …
Natao tany amin'ny Ranomasina Maty ny Zaikaben'ny Fitantanana sy ny Fandraisan'andraikitry ny Governemanta ary afaka nanatrika sy nanolotra ny sasantsasany tamin'ny fandinihany izany i Eyas .
Mijery ny olana momba ny olan'ny fanabeazana any Jordania i Arrabi raha liana tamin'ny adihevitra tao amin'ny fampitam-baovao momba ny fikarohana siantifika kosa i Khalaf.
“…a bigger issue is that nobody in a position to make decisions actually reads research results anyway. This is a well known problem, and the sad fact is that getting officials interested enough in genuinely innovative research projects and results is almost impossible” says Khalaf.
“… tsy misy olona afaka mandray fanapahan-kevitra fa mamaky ny valin'ny fikarohana fotsiny no olana lehibe. Efa fantatra izany olana izany, ary matetika zava-misy mampalahelo ny tsy fisian'ny manampahefana liana amin'ny tetikasa fikarohana zava-baovao miavaka sy ny valin'izany “, hoy i Khalaf.
Azo antoka fa lasa lafo vidy tokoa i Jordania amin'izao andro izao saingy mahatsapa i Oula fa manao fandaniana be loatra isika, raha mieritreritra kosa i Mohanned fa noho ny fidiran'ny mpitsoa-ponenana no nahatonga izany.
“Il 7abeh bi Leira!” (1Dinar ny tsirairay!)
[Sary: Roba Al-Assi]Faly i Haitham Sabbah fa niara-nivondrona ny Palestiniana mba hanangana ny governemanta iombonana voalohany, nefa mbola tsy matoky izy fa hiroso tokoa amin'ny fandriampahalemana i Isiraely. Manome antsika ny topi-maso rehetra momba ny zava-mitranga tany andrefan'ny renirano i Haitham toy ny fandravana trano tany amin'ny Morondrano Andrefana sy ny ambasadaoro mitanjaka sy mamo tany Amerika Atsimo ary ny fampiasan'ny IOF ny zaza tsy ampy taona atao ampinga iarovan-tena.
Tena tsara tarehy tokoa ny harambato any Jordania, saingy matetika no tsy fantatra. Nandeha an-tongotra tany amin'izany harambato Zarqat Ma'in izany i Rakan Mehyar ary niverina niaraka tamin'ny tantaran'ny diany. Nandritra izany fotoana izany, nanao fampisehoana tao amin'ny fisotroana kafe Jafra ny tarika tao an-toerana Sign Of Thyme ary manana fandalinana mahafinaritra momba ny zava-bitan'izy ireo i Mazen Al-Ali.
Nahita toerana vaovao mba handehanana mihazakazaka maraina tany Amman i Lina ary milaza amintsika ny momba ny atrikasa fanadihadiana izay natrehany izy raha mijery ny sehatry ny famolavolana izay miha-mitombo ao Jordania kosa i Ahmad Humeid.